octobre 2013 – filazantsaramada
MAMINDRA FO AMIN’IZAY TIA AZY ANDRIAMANITRA
« Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky, Izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby. » (Deot 7:9) Tia an’Andriamanitra ve isika? Mahatandrina ny didiny ve ianao isan’andro? Raha mahatanteraka izany isika, Jehovah Andriamanitra dia milaza eto fa mitandrina fanekena sy famindrampo […]
Publié parfilazantsaramada octobre 28, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAMINDRA FO AMIN’IZAY TIA AZY ANDRIAMANITRA
* Varotra kitapo isan-karazany sahaza ny rehetra “Misy mahafoy, nefa mitombo fananana ihany.” Ohab 11:24a Amin’ny maha sampan’asa mitory ny Filazantsara amin’ny alalan’ny fitaovam-pifandraisana (media) ny FF toy ny: Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana, boky literatiora kristiana, horonan-tsarimihetsika, fandaharana amin’ny Radio dia maimaimpoana avokoa ny fiaraha-miasa atolony amin’ny Fiangonana, Sekoly, Fikambanana. Mba hahafahana manohy izany fanamby […]
Publié parfilazantsaramada octobre 23, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Tolo-tanana ho fampitaovana ny asa fitoriana
“Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao…” Isaia 60:1 Nilaza i Winston Churchill fa “ankamantatra mifono mistery ao anaty zava-miafina i Rosia”. Tahaka izany ny finoana Kristiana ho an’ny tsy mino, hoy i Paoly: “ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an’ny Fanahin’Andriamanitra; fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria […]
Publié parfilazantsaramada octobre 18, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur LOAKAN’NY HAZAVANA NY AIZINA
« Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron’ny rano velona izy, izay mamoa amin’ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. » (Salamo 1:3) FJKM Andomotra, Synodam-paritany Mananara Firaisana: manodidina ny 90 km miala avy eto Antananarivo, lalampirenena faha 03 mampitohy an’Anjozorobe, ary avy eo ankavanan’ny Mangamila. Io no […]
Publié parfilazantsaramada octobre 17, 2013 novembre 1, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Famangiana Fiangonana
NY FINOANA: Hery enti-manao fahagagana!
« Ary Jesosy niteny tamin’ilay kapiteny hoe: mandehàna; tongava araka izay ninoanao. Dia sitrana tamin’izany ora izany ilay ankizilahy. » Matio 8:13 Hery enti-manao fahagagana. Ny eto dia ilay kapiteny no nino an’i Jesosy dia sitrana ilay zazalahy. Tsy herin’ny tenan’ilay kapiteny anefa, fa hery avy amin’Andriamanitra, nino izy fa mahasitrana ny Tompo, dia izany no nahasitrana […]
Publié parfilazantsaramada octobre 11, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FINOANA: Hery enti-manao fahagagana!
Fivoaran’ny Fanatsaràna Taorian’ny fanadihadiana izay nataon’ny Feon’ny Filazantsara niaraka tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po, mahakasika indrindra ireo lohahevitra arahin’ny mpihaino ny fandaharana « Henoy ny Feony » dia fantatra ankehitriny ireo lohahevitra noheverina fa tena mahaliana ny tanora. Ny statistika natao no nahafahana nahafantatra ny isan-jaton’ireo efa nihaino ny fandaharana, ireo tsy mbola nihaino mihitsy, ny sokajin-taonan’ireo mpihaino. Teo […]
Publié parfilazantsaramada octobre 10, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo
“Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo; ary ny filazan-tsoa mamelombelona ny taolana.”(Ohab.15:30) Ao amin’ny boky nosoratany nampitondrainy ny lohateny hoe “Bones of Contentions” (azo adika hoe ‘taolambalon’ny fifandirana’), dia asongadin’i Roger Lewin ireo adi-hevitra mitranga rehefa fongarina avy ao am-pasana ny taolambalon’olona. Izany dia nohararaotin’ny mpanoratra iray nilazany fa ny famongarana ny taolambalo toy izany […]
Publié parfilazantsaramada octobre 4, 2013 octobre 9, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FAHASALAMANA HO AN’NY FANAHY SY NY VATANA
« Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, »(2Tim 3:16) Miavaka noho ny isan-taona ny hetsika karakarain’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo eny amin’ny Fonjaben’Antanimora, raha ity volana Oktobra ity no asian-teny. Ankoatra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay kakakarain’ny Feon’ny Filazantsara dia misy ihany koa Fifaninanana […]
Publié parfilazantsaramada octobre 3, 2013 octobre 3, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fitoriana eny amin’ny Fonja